Ihe ịrịba ama Ista maka ọdịmma na ọganihu
Ememe Ista maka oge niile
Ihe dị mkpa maka ndị kwere ekwe bụ ihe ịrịba ama Paschal, nke a na-etinye amamihe nke ihe karịrị otu ọgbọ. Ndị ha na-eji amụma banyere ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu dị nso, ha ga-enye aka gbochie ihe ọjọọ ma mee ka ha nwee ọganihu na ọganihu.
Ihe ịrịba ama na nkwenkwe Ista
N'ihi ememe nke ndị mmadụ, akara ihu igwe apụtawo, nke dị mkpa ruo taa:
Ọ bụrụ na nnukwu ezumike ahụ ihu igwe doro anya - ọ bụ ụda ọkụ nke okpomọkụ, ọ bụrụ na igwe ojii - oyi na akọrọ.
Mgbe mmiri ozuzo na-ezo na Ista, ọ na-egosi na na njedebe oge opupu ihe ubi, a ga-enwe mmiri ozuzo, a ga-atụkwa anya ịgha mkpụrụ nke rye.
Oké mmiri ozuzo nke ụbọchị a na-emepụta oge mgbede na mgbụsị akwụkwọ.
Ọ bụrụ na tupu Ista agaghị enwe oge iji wepuo snow site n'ubi - nke a bụ ihe ụba nke owuwe ihe ubi bara ụba.
E nwere ihe ịrịba ama na omenala ndị ọzọ nke Ista na-enye ọtụtụ ihe gbasara ndụ:
A kwenyere na onye ahụ na-ahụ ụzọ ọwụwa anyanwụ n'ememe ụbọchị a, agaghị amata nsogbu niile n'afọ.
Okenye kwesiri ikpokwasi ntutu isi ha n'ememe a, na-ekwu na ha nwere otutu umuaka dika isi di n'isi ha.
Ekwenyere na ọ bụrụ na mmadụ na-agba ọsọ Ista, a ga-abụ ovovaniya ma nwee ike wepụ mmehie niile.
Ọ bụrụ na mmadụ mebie ihe n'ụbọchị mbụ nke oké ezumike, mgbe ahụ, nke a bụ ọnwụ ọnwụ.
Ụda ọdịda anyanwụ mara mma maka Ista na-atụ egwu.
Ista achicha - ihe ịrịba ama
Ebe ọ bụ na n'oge ochie, ụmụ nwanyị na-ekere achịcha pụrụ iche na ọtụtụ omenala na ihe ịrịba ama metụtara usoro a. Mgbe ị na-agwakọta ule ahụ, ị ​​ghaghị ịgụ ekpere a ma ama. Na omenala, a ghaghị ịgwakọta ntụ ọka ahụ maka otu awa, a kwenyere na ọ na-emetụta ọnọdụ anụ ahụ nke ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ọ daghị, ọ nwere onye ọrịa na-arịa ọrịa n'ụlọ.
N'ịkọwa ihe ịrịba ama nke achịcha Ista, ọ bara uru na-ekwu na kwa Ista tupu i tinye ya n'ekwú, ị ga-ama onye otu n'ime ndị ezinụlọ gị. Ọ bụrụ na pastry ahụ adaala, ọ pụtara na onye ahụ edoro ya nsọ ga-arịa ọrịa siri ike. Mgbe ọ dị mma - ọ bụ ihe nnọchianya nke ahụ ike. Ịchọta ihe ịrịba ama maka Ista na-ejikọta na achịcha Ista, ọ bara uru na-ekwu na ọ bụrụ n'ụbọchị ezumike ha gbawara - nke a bụ ihe ọjọọ na-egosi, nsogbu na-ese onyinyo maka ezinụlọ dum. Iji hụ na ezi owuwe ihe ubi, onye nwe ya na-eji ya na-ebute ya n'ememme oriri nke Ista maka nri ehihie.
Nsen Ista bụ ihe ịrịba ama
O siri ike iche n'ememme a na-emeghị ememe nke ụka, n'enweghị agba nsen, nke jikọtara ya na ọtụtụ nkwenkwe ụgha.
Na Ista, a ghaghị enye ụmụaka nsen nke acha ọbara ọbara (ihe nnọchianya nke ọbara Kraịst), nke ga-eme ka ahụike na ahụike ha dị.
Ihe ịrịba ama gbasara nsen Ista na-ekwu na site n'enyemaka ha, ị nwere ike iwepu spoilage, isi ọwụwa, ike ọgwụgwụ na nsogbu ndị ọzọ. Na oge ochie na Germany, ndị inyom na-arụ ọrụ na-eri ha na-achọ ka a mụọ nwa nwoke.
Ọ bụrụ na krashenki ahụ doro nsọ, e kwesịghị ịchụpụ ha n'ọnọdụ ọ bụla, n'ihi na nke a bụ omume mmehie. Na - edozi nsogbu ahụ - a na - eli ha. Ọ dịkwa mkpa ime na shea.
Ihe omimi nke Ista maka ụmụ agbọghọ na-egosi na ọ bụrụ na ịsaa mmiri na mmiri, ebe ụcha acha uhie dị ọcha dinara ruo nwa oge, ị nwere ike ichekwa mma gị.
Ndị mmadụ kweere na site n'enyemaka nke àkwá ọ ga-ekwe omume iweli mkpụrụ, nke ha na-eli ya na ọka wheat n'oge ọrụ ụka. Mgbe e were ya na ha gaa n'ọhịa, mgbe a na-agha mkpụrụ.
Uwe oriọna Ista - ihe ịrịba ama
Maka ọrụ na maka ido ya nsọ achịcha Ista, ọ dị mkpa ka ị were kandụl. A kwenyere na o nwere ike dị ukwuu ma ọ ghaghị ịbata n'ụlọ ụka. Ụdị omenala ndị Ista na-esote ebe nile:
Ihe ọjọọ bụ ọnọdụ mgbe ọkụ kandụl gafere n'oge ọrụ. A kwenyere na nke a na-akpọ ọrịa na nsogbu ndị ọzọ. Ọ bụrụ na kandụl ahụ ọkụ ruo n'ọgwụgwụ nke ọrụ ahụ, ma emesịa onye ahụ n'onwe ya mechiri ya, mgbe ahụ nke a dị mma.
A na - atụ aro ka a na - edebe ya site na kandụl ka a debe ya ruo mgbe ezumike ọzọ, dịka ihe ịrịba ama nke ndị mmadụ na - ekwu na ha bụ onye nche maka ụlọ ahụ ọkụ na maka ezinụlọ site na nkọcha.
Dị ka nkwenkwe ụgha ọzọ, iji chebe ezinụlọ gị pụọ n'ụdị nsogbu dị iche iche, esemokwu na ihe ọjọọ, ịkwesịrị ịkụ obe na ọnụ ụzọ ụzọ site na iji kandụl chọọchị .
Ihe ịrịba ama na abalị Ista na ụka
Ike dị ukwuu nwere oge mgbe anyanwụ dara, ya mere enwere ụfọdụ ihe ịrịba ama ndị kwesịrị ekwesị maka oge a.
Ọ bụrụ na abalị Ista na-amị mmiri site n'osimiri ma ọ bụ mmiri, ọ ga-enwe ike dị ukwuu. Site n'enyemaka ya, enwere ike ịgwọ gị ọrịa, ụmụ agbọghọ nwere ike imezi mma ha.
Ihe ịrịba ama na ọrụ Ista na-egosi na ọ dị mkpa ileta ya, iji mee onwe gị ka ị dị ọcha ma mee ka ndị kwere ekwe ndị ọzọ nwee nnukwu ihe omume. Ọ bụrụ na mmadụ emeriwo ya, nke a bụ ihe ọjọọ, na -eme ọtụtụ nsogbu.
Ọ bụrụ na e nwere otutu kpakpando na Ista n'oge Ista, mgbe ahụ, ị ​​ga-atụ anya frosts.
Ụmụ agbọghọ kwesịrị ịma na ọ bụrụ n'abalị ahụ ọnwa amalitela, mgbe ahụ ị gaghị aga ọrụ n'ụlọ nsọ ahụ. Ị nwere ike ịjụ ndị ọzọ ka itinye akara oriọna.
Ista na-eti mkpu - ihe ịrịba ama
Ebe ọ bụ n'oge ochie, a kwenyere na ụda mgbịrịgba ahụ nwere ike ime ka mkpụrụ obi mmadụ dị ọcha, chụpụ mmụọ ọjọọ na ya ma nye ahụ ike. Ọtụtụ ndị na-akwado amara ya, n'ihi na ọ dị ha n'obi. Ịchọta ihe ịrịba ama dị n'ememe Ista na ehihie na-ejikọta na mgbịrịgba ahụ, ọ bara uru igosi na o nwere ikike pụrụ iche pụrụ iche. Mgbe onye ọrụ ụtụtụ na-anụ ụda mgbịrịgba, ọ ghaghị ịchọrọ ya, ọ ga-emezu. Iji nye osisi n'ubi bara ụba, ịkwesịrị ịkwanye ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'oge ụda.
Ihe ịrịba ama Ista
Ndị dị na mmekọrịta kwesịrị, n'ụbọchị ezumike ahụ, na-aṅa ntị n'isusu ọnụ, dịka ọmụmaatụ, mmadụ ekwesịghị isusu ọnụ n'ọnụ ụzọ, dịka ọ na-ebu amụma maka nkewa. Ihe ịrịba ama Ista maka ịhụnanya na-egosi na ọ bụrụ na, mgbe ndị gụrụ akwụkwọ ọnụ na-anụ crows, mgbe ahụ enwere nnukwu ihe ize ndụ na n'oge na-adịghị anya mmekọrịta ahụ ga-agwụ. Ebe kachasị mma maka nsusu ọnụ - n'okpuru osisi, mgbe ahụ, ọ ga-eweta ndụ obi ụtọ.
Ihe gbasara Ista maka alụmdi na nwunye
E nwere ọtụtụ nkwenkwe ụgha ndị otu ụmụ agbọghọ nwere ike iji chọpụta onye òtù ọlụlụ ha ma lụọ. Ihe omuma ndi mmadu a kacha mara amara n'ememe Ista, negosi ugha di na nwunye:
Ọ bụrụ na ụbọchị a ka nkuanya ahụ siri ike, mgbe ahụ na nso nso, a ga-enwe nzukọ na di ma ọ bụ nwunye n'ọdịnihu.
Echiche dị ka a ga-asị na egbugbere ọnụ na-ere ọkụ ma ọ bụ na ọ dị ike na mpaghara a, a na-ese ya ọnụ na, ma eleghị anya, n'oge na-adịghị anya, ọ ga-enwe ike ịnweta onyinye nke aka na n'obi.
Ihe ịrịba ama maka izu Ista maka ezinụlọ na-agụ na ọ bụrụ na efere nke nwa nwanyị na-amaghị nwoke na-enweta efe n'oge nri Ista, mgbe ahụ, ọ ga-alụrịrị nwunye n'afọ a.
Ihe ọma dị mma bụ ịnụrụ n'ụbọchị a ka ọ na-ekwe nkwa ịlụ di na nwunye na-aga nke ọma.
A kwenyere na ọ bụrụ na ihu igwe dị njọ na Ista, mgbe ahụ, ekwetala ịlụ nwunye na afọ a, n'ihi na ọ gaghị eme nke ọma.
Ihe gbasara Ista maka afọ ime
Ọ bụrụ na nwanyị adịghị ime ime ogologo oge, mgbe Ista bụ oge dị ukwuu iji nweta ike dị ukwuu nke ezumike a, iji mee ka o nwekwuo ihe ịga nke ọma. E nwere ihe ịrịba ama pụrụ iche nke Ista na ị ga-atụrụ ime:
N'oge nri, ọ dị gị mkpa itinye efere na-adịghị ọcha n'akụkụ gị, tinye otu mpempe achịcha n'ebe ahụ, na-asị, "Nri maka ụmụaka!". Mgbe ahụ, gaa n'èzí na-eri nri nke nnụnụ.
A kwenyere na ọ bụrụ na ị idoo apụl a na ezumike a, rịọ ya ma rie ya, nrọ ahụ ga-emezu.
Dị ka ọzọ Ista si kwuo, ọ bụrụ na ị kụrụ akwa enwuru na nwatakịrị ma kwuo "Kraịst ebiliwo", ohere nke ịtụrụ ime ga-aba ụba.
E kweere na nwatakịrị a mụrụ n'ụbọchị Ista Sunday ga-enwe ụfọdụ talent, ọ pụkwara ịghọ onye a ma ama. N'agbanyeghị nke a, a kwenyere na ọ ga-enwe ezigbo ahụ ike. A mara ama ihe ịrịba ama ọzọ nke oge ochie, nke na-egosi na ọ bụrụ na nwa ahụ na-eji nwayọọ nwayọọ na-emepe emepe, mgbe ahụ, ọ dị mkpa iji ụkwụ na-aga ụkwụ n'elu ala n'elu Ista. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ghaghị ịmalite ịga ngwa ngwa, okwu na ihe ndị ọzọ.
Ihe ịrịba ama maka Ista maka ego
Na akwa ezumike a, ị nwere ike ime ka ego gị dịkwuo mma, n'ihi nke a, a na-atụ aro ka ị hụ ọtụtụ ihe ịrịba ama.
A kwenyere na ọ dị mkpa ịga chọọchị na-arụ ọrụ nke ezinụlọ dum, mgbe ahụ, ha ga-alaghachi n'ụlọ ma onye nwe ụlọ kwesịrị ịzụ ndị ezinụlọ nile.
Ihe ịrịba ama na izu Ista maka ego na-egosi na ịbawanye ọnọdụ ego gị, ị ghaghị ịkekọrịta, ya mere mgbe ọrụ ahụ kesara onyinye ebere, ọ bụghị nanị ego ka ị na-ebufe, kamakwa achịcha na nsen. O di nkpa ime ihe niile site na obi di nma, obughi n'ihi na odi mkpa.
A na-atụfusị osisi ma ọ bụrụ na a pụghị ịṅụ nri. Ha kwesịrị inye ụmụ nnụnụ nri.
Ịrịa ọrịa n'oge Ista bụ ihe ịrịba ama
Dị ka nkwenkwe oge ochie, ọ bụrụ na mmadụ ada ọrịa na ezumike ụka a, ọrịa ahụ agaghị adị ogologo, ọ ga-agbake n'oge na-adịghị anya. A kwenyere na ike kachasị elu na-echebe ma ọ bụ chebe mmadụ pụọ n'ụdị ihe ize ndụ ụfọdụ, yabụ ọ bụrụ na ọrịa ahụ emee, ọ bara uru ịtụle ndụ gị, ma eleghị anya ịmebiere mkpebi ahụ. Ihe ịrịba ama na ụbọchị Ista na-egosi na ọ bụrụ na onye nrọ ahụ hụrụ onye ikwu nwụrụ anwụ, mgbe ahụ n'ọdịnihu, ya na ndị ọ hụrụ n'anya ga-arịa ọrịa.
Ọnwụ na izu Ista - ihe ịrịba ama
E nwere ọtụtụ ụbọchị n'afọ mgbe ọnwụ, dịka omenala ndị Ọtọdọks si dị, ka a ga-ewere dịka amara. Ihe ịrịba ama n'ememe Ụbọchị Ista na-agụ na otu nwoke nwụrụ anwụ na ezumike ukwu a bụ akara nke Onyenwe anyị Chineke. Mkpụrụ obi ya na-aga eluigwe nye ndị nsọ dị nsọ. Ọ dị mkpa iburu onye dị otú ahụ site n'itinye akwa àkwá na aka nri ya.
Septemba 21 ezumike Orthodox - ihe ịrịba ama maka ụmụ agbọghọ
Gịnị mere mbilite n'ọnwụ nwụrụ anwụ ji teta?
Ntak emi nrọ nduku?
Gịnị ka di ya nwụrụ nwụrụ banyere?
Ntak emi oyomde iyak ke mmọn̄?
Gini mere nrọ nke nkita ji aru?
Gịnị kpatara nrọ nke ịgba ụgbọ ala?
Gini mere gi onwe gi ji rigo banyere igbala?
Friday, 13 - ihe ịrịba ama
Gịnị ka dragọn ahụ rọrọ?
Gịnị kpatara nrọ nke ịnya ígwè?
Catananhe - na - eto eto
Achịcha mmiri na arịlịka
Salad na prunes na anụ ọkụkọ
Kedu nkume dị mma maka ụmụ nwanyị Gemini?
Uwe ejiji - ụdị kacha mma maka ụbọchị ọ bụla
Ani Lorak uwe
Mkpụrụ ọka karọt nke na-esi ísì ụtọ nke ọma - ọma na ihe ọjọọ
Ọhụụ nke nghọta na nkà mmụta uche
Olee otu esi setịpụ ihe mgbaru ọsọ n'ụzọ ziri ezi?
Esi egwu roba?
Kedu ihe mmadụ chọrọ maka obi ụtọ?
Christian Bale - Nri
Kedu ka esi tufu mmanụ ụgbọala na mmanụ maka trimmer?